अध्यक्ष, हिमालयन अर्थोडक्स टी प्र्रोडुसर्स एसोसिएसन नेपाल (हट्पा)
घरमा आएका पाहुन हुन् वा दुई मित्र एक्कासि भेट हुँदा होस्, सन्चो–बिसन्चोपछि सोधिने प्रश्न हो— चिया कालो खाऊँ कि सेतो ? नेपालको संस्कृतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको चिया कृषकदेखि उपभोक्तासम्मको मूल्य श्रंखलामा घुमिरहँदा अर्थतन्त्रमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कृषिउपज हो । आफ्नो देशका नागरिकको माग पूरा गरेर निर्यातसमेत गर्ने सम्भवतः यो नै एकमात्र कृषिउपज हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक २ करोड २२ लाख ४० हजार किलो चिया उत्पादन भइरहेको छ । कुल उत्पादनमध्ये सीटीसी चिया ५५ प्रतिशत निर्यात हुने गरेको छ भने ९० प्रतिशत प्रांगारिक चिया निर्यात हुने गरेको छ । वर्ष दिनमा कृषक/व्यवसायीले १ अर्ब ७४ करोड २२ लाख १५ हजार रुपैयाँ कमाएको, व्यावसायिक चिया उत्पादन गर्ने ११ हजार ४१ वटा बगान रहेको लगायतका तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले वि.सं. १९२० मा चीन भ्रमणबाट फर्कंदा तत्कालीन चिनियाँ सम्राटबाट उपहारस्वरूप चिनियाँ जातको चियाको बीउ ल्याई नेपालमा भिœयाएको मान्यता छ ।
वि.सं. २०३९ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रवीरविक्रम शाहदेवले पूर्वाञ्चलका पाँच जिल्ला (झापा, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर र इलाम) लाई चिया क्षेत्र घोषणा गरेका थिए । पछिल्लो समयमा मुलुकभरका ७७ जिल्लामध्ये १४ जिल्लामा चियाको व्यावसायिक खेती भइरहेको पाइन्छ भने प्रांगारिक चियामा उत्पादनहरूको जोड रहेको पाइन्छ । प्रांगारिक चिया उत्पादन तथा बजारीकरणको क्षेत्रमा कहलिएको नाम हो— बाँस्कोटा ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक बिपी कोइरालाका प्रिय चेलासमेत रहिसकेका बाँस्कोटा ग्रुपका संस्थापक दीपक बाँस्कोटा नेपालको चिया उत्पादन क्षेत्रका नमुना व्यक्तित्व हुन् । पाँचथरमा जन्मिएका उनी २०३६ सालपछि राजनीतिक आन्दोलनसँगै चिया उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न भएका हुन् । नेपालमा पहिलो अग्र्यानिक सर्टिफाइड कम्पनीसमेत रहेको बाँस्कोटा ग्रुप स्थानीय कृषकहरूसँग मिलेर अर्थोडक्स चिया उत्पादन गरी निर्यात गर्ने कम्पनीहरूमा पनि अग्रणीमा पर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, जैविक कृषि, सहकारी, योग, साधनालगायतका बहुआयामिक क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगालेका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका बाँस्कोटासँग विशेष गरी नेपालको चिया उत्पादन, उपभोग तथा बजारीकरण, यस क्षेत्रका अवसर, चुनौती र चियाको भविष्यलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी किरण आचार्यले गरेको कुराकानीको सार :
राजनीतिक लाइनमा लागेको मान्छे, निरन्तर चिया उत्पादन तथा बजारीकरणको क्षेत्रमा निरन्तर सक्रिय हुनुहुन्छ । राजनीतिक व्यक्तिसँग चिया कनेक्सन कसरी जोडियो ?
म २००५ सालमा पाँचथरमा जन्मेको मान्छे, रानीटार गाविस वडा नंं. १ मा । १८ वर्षको उमेरमा पढ्ने चेत आयो, गाउँकै हाइस्कुलमा एकैपटक सात कक्षामा नाम लेखाएर पढें । १७ महिनामा एसएलसी पास गरें, २०२५ मा । पञ्चायत कालमा पनि राजनीति निकै हुन्थ्यो, क्याम्पस सुरु गरें— इलाम कलेजबाट । प्रिन्सिपलले राजनीति गरेको भन्दै तीन वर्षका लागि मलगाएत तीन जनालाई रेस्टिकेट गराउनु भयो । त्यसपछि प्रजातान्त्रिक पक्षधर भएर राजनीतिमा लागियो । २०३७ सालमा पञ्चायती संविधान संशोधन गरियो । बीपीले अझै १० वर्ष संविधान चल्छ भन्नुभयो । बीपीको भनाइलाई हामी अलिक गम्भीर रूपमा लिन्थ्यौं । त्यो १० वर्ष राजनीतिक गतिविधि अलिक सुस्त हुने देखेर के गरेर दिन काट्ने भन्ने दिमागमा आउन थाल्यो । त्यसपछि गाउँमा अलमलिएर बस्ने र केही गरौं भन्ने सोच आयो अनि चियातिर लागियो । अग्र्यानिक चिया खेती गर्न थालें, गाउँलेलाई पनि समेटेर अगाडि बढ्न थालियो । अझै पनि यही क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढिरहेको छु ।
त्यतिबेलै व्यावसायिक रूपमा प्रांगारिक चिया उत्पादन थाल्नु चुनौतीपूर्ण थिएन ? अग्र्यानिक चिया उत्पादनको सुरुवातदेखि हालसम्मको यात्रा कस्तो छ ?
अहिले नै चुनौतीपूर्ण छ । त्यतिबेला झन् नहुने कुरै भएन । चियाको खोजीमा दार्जीलिङ, आसामतिर पनि पुगियो । चियामा धेरै सम्भावना छ भनेर गाउँलेहरूलाई पनि सम्झाउन लागें । गाउँलेले पत्याए पो ! ब्रिटिसले गर्छ चिया बगान त, कालिङपोङ, दार्जीलिङतिर चिया बगान बनाएर चियाखेती हुन्छ भन्थे बुढापाकाहरू । तर मैले तीन वर्ष लगाएर नर्सरी तयार गरी चिया उत्पादन गरेर देखाएँ— लौ हेर, यस्तो हुन्छ चिया । तिमीहरू जग्गा देऊ, म सेयर दिन्छु, यहीँ काम गरेर रोजगारी दिलाउँछु र मालिक पनि बनाउँछु भनेर गाउँलेहरूलाई सम्झाउन थालें । नयाँ अवधारणा ल्याएँ । एक हजार रोपनी जमिन सबै किसानहरूबाट जम्मा गरियो । सेयर प्रमाणपत्र दिएर कम्पनीमा श्रमिकलाई आबद्ध गराएँ । पाँच वर्षसम्म मजदुरले पनि, कर्मचारीले पनि सेयर थप्न पाउने व्यवस्था गरियो । पछि १५ सय रोपनीमा पुराएँ । ५ हजार रोपनीमा पुराएर कारखाना लगाउने सोच थियो, तर मजदुर अभाव हुने देखेर विस्तार गर्न सकिएन । अहिलेको कञ्चनजंगा टी स्टेट त्यतिबेलै जन्माएँ । २०४२ सालदेखि औपचारिक रूपमा ठूलो उत्पादन सुरु गरेर २०४८ सालमा घरेलुमा दर्ता गरी अहिलेको कम्पनी बनाइयो । अहिले अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा पनि विकास गरेका छौं ।
२०४२ सालदेखि औपचारिक रूपमा ठूलो उत्पादन सुरु गरेर २०४८ सालमा घरेलुमा दर्ता गरी अहिलेको कम्पनी बनाइयो । अहिले अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा पनि विकास गरेका छौं ।
पञ्चायत कालमा राजा वीरेन्द्र आफै पनि चिया प्रवद्र्धनमा लागेका थिए । त्यतिबेला र अहिलेको अवस्था कसरी तुलना गर्नुहुन्छ?
मैले सुरु गर्दा माथि पाँचथरमा एउटा दुइटा बोट चिया भेटिन्थ्यो । सिक्किमतिर काम गर्न जानेले ल्याएर रोपेको पाइन्थ्यो । तर, व्यावसायिक चिया उत्पादनका लागि भनेर पाँचथरमा सुरु मैले नै गरेको हुँ । इलाममा भने नेपालको पहिलो चिया बगान इलाम टी स्टेटले चिया उत्पादन गरिरहेको थियो । हजार रोपनीमा थियो । त्यसअघि इलामको कन्याममा २०२८ सालमा राजा वीरेन्द्र आफैले उद्घाटन गरेको ५ हजारभन्दा बढी रोपनी क्षेत्र भएको कन्याम टी स्टेट स्थापना भएको थियो । वीरेन्द्रले नै २०३९ सालतिर पूर्वका पाँच जिल्लालाई झापा, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम र धनकुटालाई चिया क्षेत्र घोषणा गरेर चिया प्रवद्र्धन गरे । चियामा लगानी भएकालाई पाँच वर्षसम्म ब्याज तिर्न नपर्ने गरी ऋण दिन थालियो । ब्याजमा पनि ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था थियो ।
पञ्चायत कालमै हरेक कृषकले आफ्नो बारीमा चिया लगाउने अभियान नै सुरु भएको थियो । तराईमा पनि किसानले चिया रोप्न थाले । उत्पादन बढ्ने क्रम चल्यो । तर, त्यतिबेला नेपालमा भारतको दार्जीलिङबाट अर्थोडक्स र आसामबाट सीटीसी चिया आपूर्ति हुन्थ्यो । अहिले हामी अर्थोडक्स र सीटीसी दुवै चिया देशको माग पूरा गरेर पनि निर्यात गर्ने हैसियतमा छौं । चियामा पूरै आत्मनिर्भर भएका छौं, आयात प्रतिस्थापन गर्नेमा चिया नै अगाडि छ । तर, चिया प्रवद्र्धनमा अहिले सरकारले खासै केही गर्न सकिरहेको छैन ।
हाम्रो चिया लगेर साथीहरूले कलकत्तामा बेच्छन् र त्यही चिया दार्जीलिङे चिया भरेर विश्व बजारमा पठाइन्छ । यो विडम्बना हो ।
नेपाल चिया निर्यात गर्ने अवस्थामा छ भने सरकारको पनि भूमिका केही न केही त होला नि ?
निर्यात गर्नु हाम्रो सक्षमताभन्दा पनि बाध्यता हो । गर्नु धेरै पर्नेछ, तर हामीले गर्नै सकेका छैनौं । सरकारले एक्सपोर्ट गराउन पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन । नेपाली चिया भारत र भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा पठाउन धेरै अवरोध अझै छन् । यसका बाबजुद पनि उत्पादकहरूले सीटीसी चिया निकै प्रयास गरेर भारतमा बिक्री गर्दै आउनुभएको छ । सीटीसी तेस्रो मुलुक जाँदैन । तेस्रो मुलुक जाने पहाडी चिया (अर्थोडक्स) हो । हामीले सिधै तेस्रो मुलुक त उत्पादनको ५ प्रतिशत पनि पठाउन सकेका छैनौं । बाँकी चिया भारतमा रि–ब्रान्डिङ गरेर निर्यात भइरहेको छ । हाम्रो चिया लगेर साथीहरूले कलकत्तामा बेच्छन् र त्यही चिया दार्जीलिङे चिया भरेर विश्व बजारमा पठाइन्छ । यो विडम्बना हो । यद्यपि यही काम पनि सजिलोसँग गर्न पाए त हुने हो । कलकत्ताको अक्सनमा राख्न पाउने, बोर्डरमै सजिलै लैजान पाउने व्यवस्था भए सहज हुन्थ्यो, तर गाह्रो छ । यो विषयलाई हामीले मोदी कहाँ पुरायौं, त्यसअघिका बिहारको मुख्य मन्त्री, कृषिमन्त्रीसमेतलाई डेलिगेसन गरेर ध्यानाकर्षण गरायौं । एउटा सरकार आउँछ, एउटा काम गर्न खोज्छ, फेरि अर्को आउँछ । राजनीतिक उतावचढावले गर्दा बीसौं वर्षदेखि समस्या समाधान गर्न सकिएको छैन ।
तपाईंले विषादीरहित शुद्ध चिया उत्पादन गर्नुभयो र युवा अवस्थादेखि खानुभयो भने डाक्टरकहाँ गइराख्नु पर्दैन ।
चियाको थोरै प्राविधिक पक्षको कुरा गरौं । खासमा चिया के हो ? यसको फाइदा के छ र खाने तरिका के हो ?
तपाईंले विषादीरहित शुद्ध चिया उत्पादन गर्नुभयो र युवा अवस्थादेखि खानुभयो भने डाक्टरकहाँ गइराख्नु पर्दैन । चियामा एन्टिअक्सिडेन्ट पर्याप्त पाइन्छ, त्यसमा पनि ग्रिन टीमा धेरै प्रतिशत हुन्छ । ग्रिन टी त अमृत नै भनिन्छ । ब्ल्याक टी पनि ठीकै हुन्छ । यसको प्राकृतिक खेती गर्नुपर्छ । अग्र्यानिक हिसाबले प्रशोधन गर्नुपर्छ र बनाएर खान जान्नुपर्छ । खाने बेलामा दूधमा चिनी मिसाएर चिया खानु भने लाभदायक हुँदैन । शुद्ध चिया पानीमा राखेर खानुपर्छ । श्रीलंकाले स्वास्थ्यमा चियाको फाइदाका बारेमा अनुसन्धान गरेको रहेछ, पढेर म निकै सन्तुष्टि पाएँ । दुनियाँलाई स्वास्थ्यवद्र्धक चिया खुवाउने क्षेत्रमा लागेकोमा आफूलाई गर्वको अनुभूति गरिरहेको छु र निरन्तर लागिरहने थप हौसला पनि मिलेको छ, तर नबुझेर यसको कारोबार भइरहेको छ । बेच्नेले पैसाका लागि चिया बेचिरहेको छ भने खानेले पनि यसको महत्व बुझेको पाइँदैन । वास्तवमा यो निकै स्वास्थ्यवद्र्धक पेय पदार्थ हो । ९० डिग्रीसम्म उमालेको पानीमा पत्ती हालेर पाँच मिनेट छोपेर राखेर चिया खाने हो । सकेसम्म चियामा चिनी नहालेको राम्रो, अलि–अलि चिनि राखेर पनि खान सकिन्छ । चिनीको ठाउँमा थोरै सखर राख्दा हुन्छ । तर, दूध र चिनी मिसाएर चिया खानु भने स्वास्थ्यवद्र्धक हुँदैन । बरु सीटीसी ब्ल्याक टी खाँदा पनि ठीक हुन्छ ।
हामीले अर्थोडक्स चियाको महत्वका बारेमा हट्पामार्फत विभिन्न कार्यक्रम गरेर प्रचारप्रसार गर्दै आएका छौं । अहिले पनि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डसँग मिलेर विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छौं ।
त्यसो भए नीति–निर्माताहरूले चियाको स्वास्थ्य, वातावरण, आर्थिक–सामाजिकलगायतको महत्व नबुझेर हो चिया प्रर्वद्धनमा कम चासो दिएको ? तपाईंहरूले पनि चेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपथ्र्यो होला, हैन र ?
चियाको चर्चा–परिचर्चा हामीले पहिलेदेखि गर्दै आएका हौं । हट्पाको गठन यसै क्रममा भएको हो । हामीले अर्थोडक्स चियाको महत्वका बारेमा हट्पामार्फत विभिन्न कार्यक्रम गरेर प्रचारप्रसार गर्दै आएका छौं । अहिले पनि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डसँग मिलेर विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छौं । होटलहरूमा दूतावासका मान्छेहरूसमेतलाई बोलाएर टी टेस्टिङका कार्यक्रम पनि ग¥यौं । चिया के हो ? कसरी खाने भन्ने विषयमा जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौं । यद्यपि अलिक गति कम भएको छ । अझै बढाउने योजना छ । कम्तीमा कालो कि सेतो चिया खाने भन्ने चलन भने आएको छ । कालोलाई स्थान दिनु राम्रो हो । हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्न सक्ने गरेका छौं । तर, मुख्य जिम्मेवार निकाय राज्यबाट पहल जरुरी छ ।
राजा वीरेन्द्रले चियाका बारेमा धेरै बुझेका थिए र हुकुम प्रमांगीबाट धेरै गराए । बहुदलपछि पूरै ओझेलमा पर्यो । सरकारी तर्फबाट कुनै पहल भएन । हामी चियामा लागिरहेका व्यक्ति तथा संस्थाले धेरै आवाज उठायौं । हाम्रै आवाज सुनियो र शैलजा आचार्य मन्त्री हुँदा २०४९ सालमा । तर, त्यो बोर्ड पनि राजनीतीकरण भयो । प्रभावकारी भएन । नेपालको राजनीति स्थिर भएन । ८-१० महिनाको सरकार बन्ने र मन्त्रीले आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने थलोका रूपमा बोर्डलाई लिन थालेपछि यसबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना कम हुँदै गए । यसै क्रममा हामीले अर्थोडक्स चिया उत्पादक तथा व्यवसायीको संख्या हट्पा गठन गरेका हौं । यसअघि तराईको सीटीसी चियासम्बन्धी संस्था थियो । हट्पा बाट दबामूलक काम पनि गर्यों । सामूहिक कामका लागि सहकारीमार्फत पनि काम सुरु गयौं । २०५७ सालमा चिया नीति पनि आयो । चिया मात्र हैन हरेक क्षेत्रमा सरकारी निकायबीच समन्वय छैन, एउटा मन्त्रालयको नीति अर्को मन्त्रालयले गरेको पनि देखिएन । नीतिगत तहमै समस्या छ ।
अग्र्यानिक गर्नेलाई त सरकारी सहयोग छ त ?
हो, प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । निर्यात गर्नका लागि अग्र्यानिक सर्टिफिकेसनका लागि आधा खर्च बेहोर्ने व्यवस्था छ । आधा मात्र किन ? देशका नागरिकले पनि अर्थोडक्स, अग्र्यानिक चिया खाउन् न । ५० को साटो ९० प्रतिशत अझै शतप्रतिशत खर्च सरकारले बेहोर्दा पनि हुन्छ । यसो गर्दा अग्र्यानिक खेती गर्न प्रोत्साहन मिल्छ । युरोप अमेरिकाहरू अग्र्यानिकमा गइरहेका छन्, हामी भने रासायनिक मल खरिद गरेर डलर खर्च गरिरहेका छौं । सरकारले अग्र्यानिक प्रवद्र्धन गरे एकातिर नेपालीले सस्तोमा अर्थोडक्स चिया खान पाउँछन् भने अर्कातिर वातावरणलाई पनि सहयोग पुग्छ । रासायनिक मल र विषादी खरिद गर्ने पैसा पनि देशमै रह्यो । निर्यातको मात्रा पनि बढ्छ । विदेशी मुद्रा पनि धेरै भित्रिन्छ । अहिले ४०-५० लाख किलो छ । नेपाल टी भनेर निर्यात गर्ने चियाका लागि लोगोको व्यवस्था पनि हालै मात्र भएको छ । यसको कार्यान्वनय गर्नुपर्ने छ । उत्पादनलाई धेरै बढाउन सकिन्छ सरकारको सहयोग भएमा ।
चिया प्रवद्र्धनका लागि अक्सनको कुरा पनि निकै चर्चामा रह्यो, केही काम पनि भएन भन्ने छ । अक्सन के हो ? यसले कसरी चिया उत्पादनको क्षेत्रलाई फाइदा पुग्छ ? बजारीकरणका अरू कस्ता समस्या छन् ।
चियामा अक्सन मार्केटले बजारीकरणमा निकै ठूलो भूमिका खेलेको पाइन्छ । एउटै थलोमा निश्चित तोकिएको स्थानमा चिया उत्पादक र व्यवसायीहरूले चियाको किनबेच गर्ने थलो हो— अक्सन । अक्सनमा उत्पादकले चियाको नमुना ल्याउँछ, व्यापारीले त्यसको गुणस्तरको आधारमा चिया खरिदको अर्डर दिन्छन्, खरिद गर्छन् । भारतमा उद्योगी व्यवसायीहरूले अक्सन चलाएका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीलाई बिक्री गर्ने वातावरण छ । अक्सनको राम्रो उदाहरण मैले श्रीलंकामा पाएको छु । श्रीलंकामा सबै बगानको चियाको नमुना शुक्रबार नै अक्सन सेन्टरमा पुग्छ अनि आइतबारसम्म चिया पनि गोदाममा प्याक भइसक्छ, अक्सनमा दिने जति चिया । आठवटा व्यावसायिक ब्रोकर छन्, चिया खरिद गर्न । उद्योग वाणिज्य संघले त्यसको सञ्चालन गरेको छ । सरकारले सहयोग गरेको छ । ७ सय ७० वटा उद्योगले उत्पादन गरेको लाखौं किलो चिया एकै हप्तामा सबै अक्सन हुन्छ । आठवटा ब्रोकरले संसारका सबै खरिदकर्तालाई बेचिसक्छन् । महिना दिनभर आउने मूल्यका आधारमा चिया बगान, उद्योगले किसान र प्रशोधनको नाफा मूल्य वितरण हुन्छ ।
हाम्रोमा जस्तो किसानलाई ज्याला नपाएको गुनासो श्रीलंकामा आउँदैन । यो काम निजी क्षेत्रले गरेर साध्य लाग्दैन । बोर्डले यसको काम सुरु गरेको छ । १ करोड जति खर्च पनि गरेको छ, तर अहिले त्यसका बारेमा बजेटले नबोलेपछि अगाडि बढ्ने देखिएन भन्ने कुरो आएको छ । सँगसँगै अक्सन गरेको कुरा भारतको बोर्डर हुँदै तेस्रो मूलुकमा लैजाने वातावरण पनि बनिसक्नुपर्छ । यसो हुँदा नेपालमा अक्सन स्थापना हुँदा चिया उत्पादन तथा बजारीकरण सहज हुनेछ । भारतको बाटो तत्काल खुल्ने देखिँदैन । भारतीय बोर्डरमा चिया लैजाने लफडा फुकाउन सजिलो छैन । चाइनिजले चियालगायत १ सयभन्दा बढी वस्तुको लागि बाटो खुला गरिसकेको छ । सित्तैंमा लैजान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, चाइनामा लैजान पनि बाटोघाटोको समस्या छ । चिनियाँ मालवाहक रेल आयो भने केही हुन्छ कि ? सरकारले अलिक गम्भीर भएर कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा चिया उत्पादनको सम्भावित क्षेत्र अथाह छ भनिन्छ । चिया क्षेत्रमा विकासको गति बढाउन अब के गर्नुपर्ला ?
नेपालका चिया उत्पादन गर्ने प्रशस्त सम्भावना छ । तर, अहिलेकै अवस्थामा चिया उत्पादनले फड्को मारिहाल्ने अवस्था भने देखिँदैन । किनकि चिया मजदुरहरू कतार पलायन भइरहेका छन् । हामीले उनीहरूलाई उत्पादन र बिक्रीका आधारमा निर्धारण गर्ने तलबले पुग्दैन । चिया टिपेर भन्दा खाडीमा श्रम गरेर धेरै पैसा कमाइन्छ भनेर श्रमिक/कृषक पलायन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले विशेष कदम चालेमा मात्र केही हुन सक्छ । अर्को उपाय मेसिनरी प्रयोग बढाउने हो । मेसिनरीबाट अर्थोडक्समा भने गुणस्तरमा कमी आउने सम्भावना हुन्छ । सीटीसीमा भने मेसिनरीबाट पनि केही हुन सक्छ । मुख्य कुरा श्रमिक र श्रमिकको सुविधाका कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
अहिले श्रम ऐन नयाँ आएको छ, नियमावली पनि पास भएको छ । श्रमिकको ज्याला तोक्ने बेलामा सरकारले चियाको बाहेक तोकेको छ । चियाको तोक्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । पहिले चियाको अलग्गै थियो । अहिले सबै श्रमिकको एउटै भनेर ऐनमा आएको छ । यसरी हुँदैन । यस विषयमा हाम्रो एउटा मात्र यो छ कि पहिले चिया क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रबाट अलग्गै राख्नुपर्छ । यसको संस्कृति नै अलक छ, विशेषता नै अलग छ । चियामा १२ महिना श्रमिकलाई काम दिइन्छ, घरको परिवारको सदस्यलाई नै एकै ठाउँमा रोजगारी पाइन्छ, चिया बुझेको मान्छे बाहिर जान पाउँदैन र चियामै रोजगार हुनुपर्ने अवस्था छ र ८० प्रतिशत महिला चियामा रोजगार छन् । अहिले ज्याला तोक्ने नतोक्ने विषय हाम्रो माग नै होइन । यी तथ्यका आधारमा हामीले चियाका लागि फरक ऐन र अधिकारसम्पन्न निकाय बनाइदिनुहोस्, यही साउन १ देखि लागू हुने गरी हामीले ज्याला उपलब्ध गराउँछौं । पहिला पनि थियो, अहिले पनि बनाऔं । संसारका धेरै मुलुकमा चियासम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनुपर्छ । अरू उद्योग केही वर्षमा बन्द हुन पनि सक्छन्, काम पनि केही समयका लागि हुने खालका हुन्छन् । तर, चिया क्षेत्र भनेको स्थायी प्रकृतिको क्षेत्र हो । यसलाई फरक हिसाबले हेर्नुपर्छ । श्रीलंका सरकारले चिया मजदुरलाई १० लाख अपार्टमेन्ट बनाइदिएको छ । यस्तै केही नयाँ सरकारले बताउनुपर्यो ।